दाङमा कांग्रेसको वडा अधिवेसन भदौ २१ मा - Goraksha Online
दाङमा कांग्रेसको वडा अधिवेसन भदौ २१ मा
तुलसीपुर, १८ भदौ । दाङमा नेपाली कांग्रेसको वडास्तरको अधिवेशनको मिति सरेको छ । आज हुने भनिएको निर्वाचनको मिति सारेर नेपाली कांग्रेस दाङले भदौ २१ गते वडाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस दाङको कार्यालयमा बिहीवार सम्पन्न सर्बपक्षीय बैठकले आउँदो २१ गते वडाको निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको कांग्रेस दाङका जिल्ला सचिव शंकर डाँगीले बताए । केन्द्रीय कार्यालयले १८ गते अधिवेशनको मिति तय गरे तापनि विविध कारणले २१ गतेसम्म अधिवेशन सक्ने निर्णय भएको हो । मुख्य निर्वाचन अधिकृतसहित जिल्लाका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल गरी २१ गतेसम्म निर्वाचन सक्ने निर्णय भएको हो । त्यस्तै शुक्रवार निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्ने नेपाली कांग्रेस दाङले जनाएको छ ।
‘वडा तहको मतदान २१ गते हुनेछ, २१ गते सवै वडाहरुको अधिवेशन सक्ने गरी मिति तय भएको छ’, सचिव डाँगीले भने । अधिवेशनलाई कसरी सहजता र सरलता बनाउने विषयमा छलफल भएको बताएको छ । १४औं महाधिवेशन वडा तहमा भने शुक्रबारदेखि नै सुरु हुनेछ । शुक्रबार करिब ६० जिल्लामा वडा अधिवेशन हुने भएको छ । कांग्रेसले भदौ १८ मै देशैभरका सबै वडामा अधिवेशन गर्ने भने पनि तयारी नपुगेकोले केही जिल्लामा केही दिन धकेलिने भएको हो । वडा अधिवेशनका लागि मतदाता क्रियाशील सदस्य हुन् ।
कांग्रेसले दाङले १८ हजार बढीलाई क्रियाशील सदस्य बनाएको छ । वडा अधिवेशनबाट वडामा सभापतिसहित कार्यसमिति गठन र क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने काम हुन्छ । जिल्लाको निर्वाचन २१ गते तोकिए पनि विभिन्न वडाहरुमा भेला तथा छलफलहरु भने चलिरहेका छन् । सबै वडामा सर्वसहमतिका लागि प्रयास जारी राखेको नेताहरुले बताएका छन् । वडाहरुमा निर्वाचन अधिकृतहरु भने हालसम्म पनि खटिएका छैनन् । निर्वाचन भने २१ गते हुने भएको छ ।
यसैबीच पश्चिम दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं. ४ को संस्थापन र इतर पक्षले घरदैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन् । वडामा सहमति नजुटेपछि संस्थापन पक्ष र इतर पक्षले आ–आफ्नो समूह बनाई निर्वाचनमा होमिएका छन । वडा नं. ४ को चिराघाट, रोइनिघारी, हिरापुर, गिधनिया, एकलीमा उम्मेदवारसहितको टोलीले मतदातासँग आफ्नो पक्षमा भोट मागेका छन् । वडा नं. ४ को संस्थापन इतर पक्षको वडा सभापतिमा चेतबहादुर डाँगीलाई अघि सारिएको छ । २ उपसभापति, २ सचिव, २ सहसचिव र अन्य सदस्य गरी २२ जना उम्मेदवार रहेका छन् ।
सामुदायिकका प्राविधिक शिक्षा संकटमा
कांग्रेसको चौधौ महाधिवेशन : नेतृत्वको ध्यान तल्लो तहमा, सबै वडामा सहमति प्रयास